ओलीलाई अदालतले होइन अहंकारले हराएको हो : मिनेन्द्र रिजाल | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
ओलीलाई अदालतले होइन अहंकारले हराएको हो : मिनेन्द्र रिजाल
२०७८ साउन ३, आइतवार, ८: ३६PM
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी शर्मा ओलीको सरकार अदालतबाट नभइ अहंकारबाट अपदस्थ भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद रिजालले सरकारबाट बाहिरिएपछि अदालतलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन । मिलेमतोमा संविधान मिच्नेहरूलाई सम्झाउन खोजेको मात्रै हो । अदालतले होइन अहंकारले तपाईंलाई हराएको हो’, डा. रिजालले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै नेता रिजालले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई ‘धेरै उड्ने वा धेरै गिर्ने’ काम नगर्न सचेत गराए । ‘मेरो सुझाव छ तपाईंहरूलाई, धेरै उड्ने पनि नगर्नुस् धेरै तल पनि नजानुस् । एउटा सीमाभित्र बस्नुस् । हामीलाई कुनै उन्माद छैन, सत्ताबाहिर हुनेले पनि मनमा तिक्तता नलिनुस्’, रिजालले भने ।
अघिल्लो लेखमाजसपाको ठाकुर पक्षले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने
अर्को लेखमासाउनदेखि ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लागु, लगानीकर्तालाई ‘मेरो सेयर’ एप अपडेट गर्न आग्रह